फेसबुक ह्याक हुने समस्या बढ्दो, कसरी बच्ने ? हेर्नुहोस् उपयोगी टिप्स - Gandak News
फेसबुक ह्याक हुने समस्या बढ्दो, कसरी बच्ने ? हेर्नुहोस् उपयोगी टिप्स
गण्डक न्यूज द्वारा १४ भाद्र २०७६, शनिबार १८:२१ मा प्रकाशित
फेसबुक र फेसबुक जस्ता अन्य सामाजिक संजालहरू ह्याक हुन सक्ने सम्भावना सधैं रहेको हुन्छ । नेपालका सेलिब्रेटीहरुका फेसबुक प्रायः ह्याक भएका छन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसबुक वा अन्य सामाजिक संजाल ह्याक नहोस् भनेर विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो फेसबुक र अन्य सामाजिक संजालको अकाउन्ट सुरक्षित राख्नका लागि तल उल्लेख गरिएका कार्यहरू गर्नुहोस् :
१. आफ्नो पासवर्ड सधैं गोप्य र पृथक राख्नुहोस्
आफ्नो पासवर्ड कसैलाई पनि सेयर नगर्नुहोस् । फेसबुक वा कुनै पनि सामाजिक संजालको पासवर्ड सकेसम्म पृथक बनाउनुहोस् । संसार कै सबैभन्दा कमजोर पासवर्डहरूको सूची यस लेखमा प्रदान गरिएको छ :
दुई कारक प्रमाणीकरण सुचारु गरेपछि कुनै पनि नयाँ स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा फेसबुक लग इन गर्ने समयमा तपाईंको फेसबुकमा दर्ता भएको नम्बरमा एउटा कोड पठाउछ । उक्त कोडलाई फेसबुकमा हानेपछि मात्र फेसबुकमा लग इन गर्न सकिनेछ । यसरी तपाईंको फेसबुकको पासवर्ड चोरी भए पनि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईंको फेसबुक खोल्न सक्नेछैन ।
हालमा प्रयोगमा नआएका इमेल र मोबाइल नम्बरबाट आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट चलाउनु हुँदैन । पुरानो र धेरै महिना देखि प्रयोगमा नआएका सिम कार्डको नम्बरहरू नेपाल टेलिकम र एनसेलले नयाँ प्रयोगकर्तालाई जारी गर्ने गर्दछ । तपाईंको पुरानो नम्बर जारी गरिएको नयाँ व्यक्तिले सजिलैसँग Forgot Password भन्ने विकल्पको प्रयोग गरेर तपाईंको पासवर्ड रिसेट गर्नसक्छ । यसै कारणले गर्दा पनि तपाईंले यदि पुरानो र प्रयोगमा नआएको नम्बरबाट फेसबुक सुचारु गर्नु भएको छ भने उक्त नम्बर परिवर्तन गर्नुहोस् ।